Xidhmada Maalmaha 4 maalmood ee Chiang Rai @ The Legend Chiang Rai -
Xirmooyinka 4 Maalmood ee Xidhmada Malabka ee Chiang Rai @ The Legend Chiang Rai
Maalinta 1aad | Chiang Rai [Casho]
Kadib imaatinka garoonka diyaaradaha iyo u wareejinta hudheelka, waqtigu waa bilaash waqtiga firaaqada. Galabnimadii waxaan ku raaxeysaneynaa booqasho saddex-lugood leh oo lagu tamashleeyo Wat Phra Sing, oo sidoo kale loo yaqaan 'Macbadka Libaax Budha.' Macbudkan waxaa ku yaal sawirro badan oo aad loo ixtiraamo waxayna soo bilaabantay qarnigii 14aad markii Chiang Mai ay ahayd caasimadda Boqortooyada Lanna. Fiidnimadii dareenkaaga ayaa la yaabi doona Casho Soo Dhaweyn Thai ah oo lagu soo dhoweeyo goobta dalxiiska si aad u siiso aragti dheer oo ku saabsan cunnada Thai.
Habeenimadii Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa oo ku taal 1 Bedroom Pool Villa.
Maalinta 2aad | Chiang Rai [Quraac, Casho]
Hal-abuurnimadeena waxaa ka mid ah safar doon oo subax subax ah laga soo qaado aagga Triangle Dahabka ah ee hoos mara Chiang Saen. Waxaan sii wadaynaa baska si aan u booqano Madxafka Chiang Saen oo ay ku yaalliin xulasho layaableh oo ah sawirradii hore ee Buddha iyo waxyaabo qadiim ah Safarkayaga sidoo kale waxaa ka mid ah booqashooyinka Wat Chedi Luang, Wat Pasak iyo Wat Phra That Chom Kitti. Qaybta dambe waxay ku taalaa buurta dusheeda waxayna leedahay pagoda ay ku jiraan waxyaabo Buddha ah. Galabtii, waxaad ku raaxeysan kartaa waqtiga firaaqada ee dalxiiska oo ay ku jiraan kuwa lagu nasto iyo fiidkii casho shumac shidan.
Maalinta 3aad | Chiang Rai [Quraac, Casho]
Waxaan u kaxeynaa tuulada quruxda badan ee waqooyiga ku taal ee Baan Mae Ma oo waxaan booqanaa dukaanno dharka dharka lagu qurxiyo oo guryaha lagu yaqaan 'Lanna style'. Kadib waxaan u jiheysaneynaa jihada Doi Mae Salong anagoo raacayna muuqaal qurux badan oo buuro ah waxaana booqaneynaa Baan Lao Sib si aan markhaati uga dhigno tolnimada Yai ee asalka ah Ka dib waxaan la macaamilnaa dadka asaliga ah tuulada Lisu ee Baan He Ko. Fiidnimadu waxay ku lug leedahay safar tuk-tuk oo xiiso leh oo ka socda dhinaca dhabta ah ee Chiang Rai. Waxaan dhaafi doonnaa Taallada King Mengrai, oo lagu xusayo boqortooyadii aasaasay Chiang Rai sanadkii 1262 iyo sidoo kale Daarta Dahabka Dahabiga ah, oo la dhisay 2008 si loo sharfo Boqornimadiisa Bhumibhol Adulyadej. Wicitaankeena ugu dambeeya waa suuqa habeenkii ee noolaha oo leh xulashooyin cunto oo badan iyo madadaalo toos ah.
Maalinta 4aad | Chiang Rai [Quraac]
Maalinta waa xilliga firaaqada, oo ay ku xigto ka soo wareejinta garoonka loo dalxiis tago ee Chiang Rai Airport.
Mudnaanta gaarka ah
Safar wareeg ah oo qaas ah oo laga raro garoonka diyaaradaha ee Chiang Rai loona aado dhanka;
 Booqashada Tricycle ee Complimentary Tricycle ee lagu tagayo Wat Prhra Singh iyo Wat Pra Kaew, oo ay galbiyeen shaqaalaha ku hadla luuqada Ingriiska ee loo dalxiis tago;
 Thai waxay casho dhigtay habeenkii 1aad makhaayada Sala Rimnam;
Dinner Shumaca casho ee habeenkii 2aad meel gooni ah;
 2 saac Royal Siamese Duugista Dhaqanka iyo Dhirta dhirta kulul;
Mo Qolka malabka ee qolka diyaarinta oo ay ku jiraan dambiisha miraha, qaabka wadnaha ubaxa iyo dhalo khamri dhalaalaya.
Booqashooyinka iyo wareejinta adeegyo hagitaan ah oo ku hadlaya Ingiriisiga ruqsad haysta / caawimaad. Luqadaha kale waa la codsaday waana la heli karaa;
 Guryaha iyo cuntada (cuntada kaliya) sida ku qeexan barnaamijka;
 Booqashada Tricycle ee Complimentary Tricycle ee lagu tagayo Wat Pra Singh iyo Wat Pra Kaew (qiyaastii 1 saac) Shaqaalaha ka shaqeeya dalxiiska ee ku hadla Ingiriiska;
Booqashooyinka iyo wareejinta baabuur hawo qaas ah leh oo leh adeegyo hagitaan ah oo ku hadlaya Ingiriisiga ruqsad haysta Luqadaha kale waa la codsaday waana la heli karaa;
Treatment Daaweynta Isboortiga sida ku xusan waana in horay loo sii dhigaa imaatinka kahor;
Dhammaan canshuuraha iyo khidmadaha khuseeya;
Comp Magdhawga Kharashka Kaarboon Kaar ee iskaa ah: USD1.50 qofkiiba maalintii;
Expenses Kharashyada shaqsiga ah sida cunnooyinka kale, cabbitaannada, talooyinka iyo abaal-marinta, dukaamaysiga, ujradaha safarka iyo booqashooyinka / booqashooyinka ikhtiyaariga ah, haddii aan si kale loo sheegin;
Hoteelka hoyga u ah halka laga bilaabayo;
Tikidh kasta oo diyaaradeed ama caalami ah, canshuuraha garoonka, fiisooyinka fiisaha, khidmadaha fiidiyowga / fiidiyowga ee gaarka ah, kharashka gaadiidka oo dheeri ah kana imanaya gobollada laga qaadayo ama laga dejinayo (sida garoomada diyaaradaha, meelaha dalxiiska ee magaalada ka baxsan, dekeddaha, dekedda iyo hoyga magaalooyinka ku xeeran);
Kharash kasta oo hoy ah oo dabiici ah. Tan waxaa ka mid ah (xaflad qasab ah) cunno iyo cabitaanno, isticmaalka baararka yar-yar, dharka lagu dhaqdo, adeegga qolka, wixii taleefan ama kharashyada kale ee isgaarsiinta ee aan lagu sheegin barnaamijka;
Customers Safarada caalamiga ah iyo caymiska caafimaadka ee macaamiisha.
Wanaagsan in la ogaado
Qiimayaasha habeen kordhinta ayaa ah mid saafiya qofkiiba habeenkiiba oo ka kooban quraacda maalin kasta oo keliya;
Case Xaaladda joogitaanka waxaa ka mid ah 2 xilli xirmo oo kala duwan, kaliya qiimaha ka sarreeya ayaa loo codsan doonaa xirmada bisha Malabka. (Qiyaasta kordhinta waxaa loo xisaabin doonaa iyadoo loo eegayo heerka kordhinta ee xilliyada la kala leeyahay);
 Waxaan xaq u leenahay inaan ku sameyno isbeddellada lagama maarmaanka ah safarka haddii ay dhacdo xaalado cimilo oo aan fiicnayn ama xaalado nalagu qasbay inaan wax ka beddelno si aan u damaanad qaadno badbaadada martideena;
Elements Curiyeyaasha dabiiciga ee nooc kasta ha ahaadeene waxay waxyeello u geystaan ​​qalabka elektaroonigga ah. Waa mas'uuliyadda qofka macaamiisha ah inuu hubiyo in kamarad kasta, taleefanka gacanta ama qalab kale si habboon loo duubay oo looga ilaalinayo cunsurradan. Annaga masuuliyad nagama saran doono sinnaba dayaca iyo / ama inaan raacin soo jeedimaha wixii waxyeelo ah ee la xidhiidha tan;
 Dhowrista dhirta, duunyada iyo hantideeda taariikheed iyo tan dhaqameedba waxay noo leedahay muhiimad weyn. Ma daba geli doonno waxqabadyo aan waafaqsanayn mabaadi'deenna xayawaanka, duurjoogta iyo deegaanka;
 Fadlan hubi inaad soo qaadato muraayadaha indhaha, koofiyad / koofiyad iyo sunblock oo leh qayb SPF sarreysa markaad nala safreyso. Xitaa markay daruuro tahay, qorraxdu wali waxay leedahay awood aad u weyn;
Dhammaan waqtiyada la soo sheegay, muddada iyo joogsiga waxay ku saleysan yihiin qiyaasitaanno waxaana laga yaabaa inay is beddelaan duruufo lama filaan ah awgood, cimilada iyo xaaladaha taraafikada oo ka baxsan awooddeenna.
Tilmaamaha Safarka Chiang Mai Xalaal
Halyeeyga Chiang Rai Boutique River Resort & Spa
Hal-abuurnimadeena waxaa ka mid ah safar doon subaxnimo ah oo ka timaadda aagga Saddexagalka Dahabiga ah ee hoos mara Chiang Saen.